Paragoay: Ny 100 andro voalohany nitondran’ny filoha Lugos · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2008 21:10 GMT
sarin'i Fernando Lugo APC ary ankatoavina noho ny Creative Commons license.
Nandalo ny 100 andro voalohany nitondran'ny filoha Paragoaiana voafidy Fernando Lugo hatramin'ny nandraisany ny fitondrana tamin'ny volana aogositra lasa teo. Nangetaheta fanovana ny Paragoaiana, fanovana izany nantenaina be avy amin'ny Filoha vaovao, izay mpitondra fivavahana teo aloha, sy avy amin'ny governemantany. Nisy ary ny mpamaham-bolongana vitsivitsy naka fotoana hanoratana ny andro 100 voalohany nitondran'ny Filoha LUgo.
Nataoon'ny bolongana Rescatar [es] fampitahana tamin'ny hazo Pau D’arco (Tajy) ny ny 100 andro voalohany nitondran'i Lugo tamin'ny filazany fa nanantena hahita voninkazo (izany no tena voninkazo) mamelana eny amin'ny hazo ny olona, saingy mbola mila jereny aloha izany.
Nomen'i Edgar Ruiz Diaz isa 1 ka hatramin'ny 10 tsirairay avy tao amin'ny bolongany Las Preguntas de Venerando [es] Lugo sy ny mpikambana ao amin'ny governemantany tamin'ny zavabitany.
Lopez Barrios ao amin'ny El blog de Lopez Barrios [es] no niteny fa, niezaka hitondra ny firenena ao anatin'ny filaminana ny filoha Lugo, saingy tsy nizotra araka izay efa nomaniny ny fandehan-javatra.